လမ်းဆုံ .....: February 2010
ဒါလေးကတော့ Google ကအကြာသေးခင်ကလုပ်လိုက်တဲ့ Google Buzz ကိုကျနော်တို၇ဲ့အီးမေးလ် Homepageကနေမပေါ်အောင်လုပ်နည်းလေးပါ။ Turn Off Buzz လုပ်လိုက်ကြ ၇အောင် လွယ်လွယ်လေးပါ ဘဲ၊ Homepage ရဲ့အောက်ကဆင်းလိုက်ပါတွေ့၇ပါလိမ့်မည်။ အောက်ပုံအတိုင်း turn off buzz ဆိုတာလေးနိုပ်ပေး လိုက်ရုံပါ၊၊ အားလုံးကိုကျေးဇူးကမ္ဘာ
ReadMoe “Trun Off Google Buzz”
Posted by Kaung Khant at 28.2.100comments Links to this post
၁။ ကိလေသာပယ်နိုင်မှ ချမ်းသာရ တရားတော်
၂။ ပဗ္ဗဇ္ဇမင်္ဂလာသာသနာပြု ကုသိုလ် တရားတော်
၃။ ရှင်ပြုအလှူ တရားတော်
၄။ ရှု၊ တည်၊ သိ၊ မငြိ ဆင်းရဲငြိမ်း တရားတော်
၅။ သမထ ဘာဝနာနှင့် ဝိပဿနာ ဘာဝနာ တရားတော်
၆။ သာသနာ့ အမွေခံ တရားတော်
၇။ သာသနာတော်အရှည်တည်တံ့ကြောင်း တရားတော်
၈။ သဘာဝလက္ခဏာနှင့် သာမညလက္ခဏာ တရားတော်
၉။ သတိပဋ္ဌာန် ဝိပဿနာ တရားတော်
၁၀။ သင်္ခါရနှင့် သင်္ခတ တရားတော်
၁။ အဖြစ်နှင့် အပျက် တရားတော် ၁၂-၁၂-၁၉၈၄
၂။ ဗုဒ္ဓ၏ အနတ္တဝါဒ တရားတော်
၃။ ပူဇော်ထိုက်သူ တရားတော် ၄-၈-၂၀၀၁
၄။ စိတ်ယဉ်ကျေးက ချမ်းသာရ တရားတော် ၁၄-၅-၁၉၉၇
၅။ ရှုမှတ်မှုမြဲလျှင် ကိလေသာစင် တရားတော်
၆။ ဆွမ်းကျိုးတုန့် ပြန် မြတ်မွေခံ တရားတော်
၇။ သတိပဋ္ဌာန် တရားတော်
၈။ သဿတဒိဋ္ဌိ၊ ဥစ္ဆေဒ ဒိဋ္ဌိ၊ အန္တရာဘဝဒိဋ္ဌိ တရားတော်
၉။ သိက္ခာသုံးပါးဖြင့် ကိလေသာသုံးပါး ပယ်သတ်ပုံ တရားတော် ၁၄-၁၁-၁၉၉၈
၁၀။ သိ၊ ပယ်၊ ဆိုက်၊ ပွား တရားတော်
၁။ အကြောင်းနှင့် အကျိုး တရားတော်
၂။ အပဏ္ဏကပဋိပဒါ တရားတော်
၃။ အတ္တခြောက်မျိုး တရားတော်
၄။ အတ္တဒိဋ္ဌိနှင့် သက္ကယဒိဋ္ဌိ တရားတော်
၅။ ဘိက္ခုနှင့် သမဏ တရားတော် ၁၁-၄-၂၀၀၇
၆။ ဗိုလ်ငါးပါး တရားတော်
၇။ ချမ်းသာလေးပါး တရားတော်
၈။ ဓမ္မစင်္ကြာ တရားတော်
၉။ ဣနြေ္ဒငါးပါး တရားတော်
၁၀။ ခန္ဓာငါးပါး တရားတော်
၁။ အာဇီဝဋ္ဌမကသီလ တရားတော် ၁၁-၈-၂၀၀၅
၂။ ဘယသုတ်ဒေသနာတော်နှင့် ဗုဒ္ဓနည်းကျချမ်းသာစွာနေထိုင်နည်း တရားတော်
၃။ မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမ တရားတော်
၄။ မေတ္တာ တရားတော် ၃၀-၈-၂၀၀၄
၅။ စိတ်ကိုဖြူစင်စေသည့် နည်းခြောက်မျိုး တရားတော်
၆။ စေတောခိလငါးပါး တရားတော်
၇။ တစပဉ္စကမ္မဋ္ဌာန်း တရားတော်
၈။ တရားဂုဏ်တော်ခြောက်ပါး တရားတော်
၉။ သမ္မဇညလေးပါး တရားတော်
၁၀။ သရဏဂုံတရားနှင့် အသေးစိတ်ရှုပုံ တရားတော်
၁။ ချမ်းမြေ့ မင်္ဂလာ သင်စရာ တရားတော်(၁) ၂၃-၁၁-၁၉၉၈
၂။ ချမ်းမြေ့ မဂ်လာ သင်စရာ တရားတော်(၂) ၂၃-၁၁-၁၉၉၈
၃။ မေတ္တာ တရားတော်(၁)
၄။ မေတ္တာ တရားတော်(၂)
၅။ ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုး တရားတော်(၁) ၁၈-၄-၁၉၉၉
၆။ ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုး တရားတော်(၂) ၁၈-၄-၁၉၉၉
၇။ စိတ်ကိုထိန်းမှ ချမ်းသာရ တရားတော်(၁) ၂-၁၀-၁၉၉၉
၈။ စိတ်ကိုထိန်းမှ ချမ်းသာရ တရားတော်(၂) ၂-၁၀-၁၉၉၉
၉။ ယခုလုပ်ရမည့် အလုပ် တရားတော်(၁)
၁၀။ ယခုလုပ်ရမည့် အလုပ် တရားတော်(၂)
၁။ ဣနြေ္ဒငါးပါး အားကောင်းကြောင်း အင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၁)
၂။ ဣနြေ္ဒငါးပါး အားကောင်းကြောင်း အင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၂)
၃။ ဣနြေ္ဒငါးပါး အားကောင်းကြောင်း အင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၃)
၄။ ဣနြေ္ဒငါးပါး အားကောင်းကြောင်း အင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၄)
၅။ ဣနြေ္ဒငါးပါး အားကောင်းကြောင်း အင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၅)
၆။ ဣနြေ္ဒငါးပါး အားကောင်းကြောင်း အင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၆)
၇။ ဣနြေ္ဒငါးပါး အားကောင်းကြောင်း အင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၇)
၁။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၁)
၂။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၂)
၃။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၃)
၄။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၄)
၅။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၅)
၆။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၆)
၇။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၇)
၈။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၈)
၉။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၉)
၁၀။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၁၀)
၁။ အကောင်းလေးမျိုး တရားတော်
၂။ အားကိုးမှန်မှချမ်းသာရ တရားတော်
၃။ ဓမ္မုဒ္ဓေသလေးပါး တရားတော်
၄။ မီးလောင်အိမ်မှ ဥစ္စာရ တရားတော်
၅။ မင်္ဂလာတရားတော်နှင့် တရားနာရခြင်းအကျိုးငါးပါး တရားတော်
၇။ ဆဋ္ဌင်္ဂဒါန တရားတော်
၈။ သပ္ပုရိသဒါန တရားတော်
၉။ သစ္စာလေးပါး တရားတော်
၁၀။ သီလရနံ့အရပ်တိုင်းပြန့်တရားတော်
၂။ ဉာဏ်တဆယ့်ခြောက်ပါး တရားတော်
၃။ စက်လေးပါး တရားတော်
၅။ သက္ကာယဒိဋ္ဌိ တရားတော်
၆။ ဥပါဒါန်လေးပါး တရားတော်
၇။ ယခုလုပ်ရမည့်အလုပ် တရားတော်
၈။ ယောဂီအရည်အသွေးငါးပါး တရားတော်
၉။ ရည်စူးလှူကြ မြတ်ဒါန တရားတော်
၁၀။ ဈာန်ငါးပါးတရား တရားတော်
၁။ အလှူတတ်လျှင် နိဗ္ဗာန်ဝင် တရားတော်
၂။ သတိ တရားတော်
၃။ သက္ကာယဒိဋ္ဌိ တရားတော်
၄။ သပ္ပုရိသဒါနနှင့် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ တရားတော်
၅။ သိက္ခာသုံးပါး ရှင်ပြုအလှူ တရားတော်
၆။ သီလဗ္ဗတပရာမာသ တရားတော်
၇။ ၀ိပဿနာ အခြေခံ တရားတော်
၈။ ၀ိပဿနာ တရားတော်
၉။ ဝေဒနာ နုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန် တရားတော်
၁၀။ ၀ဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ရေး တရားတော်
၁။ ၂၃-ကြိမ်မြောက် ကထိန်အလှူ တရားတော်
၂။ အဘိဓမ္မာအကြောင်းနှင့် သတိပဋ္ဌာန် တရားတော်
၃။ အမြတ်ဆုံးပူဇာ တရားတော်
၄။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ တရားတော်
၅။ မုချပြုလုပ်ရမည့် ကုသိုလ် သုံးမျိုး တရားတော်
၆။ ပုညကြိယ၀တ္ထုဆယ်ပါး တရားတော်
၇။ သတိပဋ္ဌာန်အကျဉ်းချုပ် တရားတော်
၈။ ဗောဇ္ဈင် ခုနှစ်ပါး တရားတော်
၉။ ယုံကြည်မှုရှိမှ ချမ်းသာရ တရားတော်
၁၀။ ရုပ် ၊ နာမ် သိလျှင် ဒိဋ္ဌိစင် တရားတော်
၁။ အတ္တခြောက်မျိုး တရားတော်(၁) ၃၁-၈-၁၉၉၇
၂။ အတ္တခြောက်မျိုး တရားတော်(၂) ၆-၉-၁၉၉၇
၃။ ဘယသုတ် တရားတော် (၁)
၄။ ဘယသုတ် တရားတော် (၂)
၅။ ဣနြေ္ဒငါးပါး တရားတော် (၁) ၂၄-၅-၂၀၀၀
၆။ ဣနြေ္ဒငါးပါး တရားတော် (၂) ၂၄-၅-၂၀၀၀
၇။ နတ်တို့ပျော်သံ တရားတော် (၁)
၈။ နတ်တို ပျော်သံ တရားတော် (၂)
၉။ ၀ိပဿနာတရား နှင့် ယောဂီအင်္ဂါငါးပါး တရားတော် (၁) ၉-၁၀-၂၀၀၄
၁၀။ ၀ိပဿနာတရား နှင့် ယောဂီအင်္ဂါငါးပါး တရားတော် (၂) ၉-၁၀-၂၀၀၄
၁။ ကောင်းမှုနှင့် မကောင်းမှု တရားတော် ၂၇-၁၁-၂၀၀၇
၂။ ဉာဏ်စဉ်အကျဉ်းချုပ် တရားတော် ၅-၁၀-၂၀၀၇
၃။ လူမိုက်နှင့် လူလိမ္မာပညာရှိ ခြားနားချက် တရားတော် ၂၈-၁၁-၂၀၀၇
၄။ ဆေးဖေါ်၍သောက် ရောဂါပျောက် တရားတော်
၅။ စိတ်အေးကြည်လင် အကျိုးမြင် တရားတော် ၂၈-၄-၂၀၀၇
၆။ သားသမီးကျင့်ဝတ်ငါးပါး တရားတော် ၂၉-၈-၂၀၀၇
၇။ ဥပါဒါန်လေးပါး နှင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိ တရားတော် ၉-၉-၂၀၀၇
၈။ ၀ါရိတ္တသီလနှင့် စာရိတ္တသီလ တရားတော် ၁၆-၇-၂၀၀၇
၉။ ၀ိသုဒ္ဓိ ခုနစ်မျိုး တရားတော် ၁၉-၁၀-၂၀၀၇
၁၀။ ယောနိသောမနသိကာရ နှင့် အယောနိသော မနသိကာရ တရားတော် ၁၀-၉-၂၀၀၇
၁။ စိတ် တရားတော် (၁) ၂၇-၄-၂၀၀၇
၂။ စိတ် တရားတော် (၂) ၂၇-၄-၂၀၀၇
၃။ တရားအားထုတ်တာ ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ တရားတော် (၁) ၈-၁၂-၂၀၀၇
၄။ တရားအားထုတ်တာ ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ တရားတော် (၂) ၉-၁၂-၂၀၀၇
၅။ သူတော်ကောင်းနှင့်သာပေါင်းပါ တရားတော် (၁) ၂၇-၉-၂၀၀၇
၆။ သူတော်ကောင်းနှင့်သာပေါင်းပါ တရားတော် (၂) ၂၇-၉-၂၀၀၇
၇။ ဝေဒနာ နုပဿနာတရားတော် (၁)
၈။ ဝေဒနာ နုပဿနာတရားတော် (၂)
၉။ ၀ဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ရေး တရားတော် (၁)
၁၀။ ၀ဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ရေး တရားတော် (၂)
၁။ အဘိဓမ္မာ ဒေသနာနှင့် ပ၀ါရဏာပွဲအကြောင်း တရားတော် ၂၈-၁၀-၂၀၀၄
၂။ အပဏ္ဏက ပဋိပဒါ တရားတော်(၁) ၁-၁၂-၁၉၉၈
၃။ အပဏ္ဏက ပဋိပဒါ တရားတော်(၂) ၁-၁၂-၁၉၉၈
၄။ မာရ်ငါးပါး တရားတော်(၁)
၅။ မာရ်ငါးပါး တရားတော်(၂)
၆။ မာရ်ငါးပါး တရားတော်(၃)
၇။ ပုဂ္ဂလသုတ်ဒေသနာတရားတော် (၁) ၁၂-၁၂-၂၀၀၇
၈။ ပုဂ္ဂလသုတ်ဒေသနာတရားတော် (၂) ၁၂-၁၂-၂၀၀၇
၉။ သမ္ပဒါလေးပါးတရားတော် (၁)
၁၀။ သမ္ပဒါလေးပါးတရားတော် (၂)
၁။ ၀ိပလ္လာသ တရားတော်(၁) ၁၄-၄-၁၉၉၇
၂။ ၀ိပလ္လာသ တရားတော်(၂) ၁၅-၄-၁၉၉၇
၃။ ၀ိပလ္လာသ တရားတော်(၃) ၁၆-၄-၁၉၉၇
၄။ ၀ိပလ္လာသ တရားတော်(၄) ၁၇-၄-၁၉၉၇
၅။ ၀ိပလ္လာသ တရားတော်(၅) ၁၈-၄-၁၉၉၇
၆။ ၀ိပလ္လာသ တရားတော်(၆) ၁၉-၄-၁၉၉၇
၁။ စိတ်ကိုရှုက ချမ်းသာရ တရားတော်
၃။ ဘာသာရေးစံ ၊ သာသနာရေးမှတ်ကျောက် တရားတော်
၄။ ၅၂၈ သွယ် မေတ္တာတရားတော် ၃၁-၇-၁၉၉၈
၅။ ဗုဒ္ဓနေ့တရားတော် (၁)
၆။ ဗုဒ္ဓနေ့ တရားတော် (၂)
၇။ သရဲမခြောက်တဲ့ ဂါထာ တရားတော်(၁) ၁၇-၄-၂၀၀၈
၈။ သရဲမခြောက်တဲ့ ဂါထာ တရားတော်(၂) ၁၇-၄-၂၀၀၈
၉။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် (၁) သက်တော် ၈၀ ပြည့်မှာဟော ၁၀-၈-၂၀၀၈
၁၀။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် (၂) သက်တော် ၈၀ ပြည့်မှာဟော ၁၀-၈-၂၀၀၈
၁။ မြတ်စွာဘုရား ပထမဆုံး ကပိလ၀တ်ပြည် ဒေသစာရီ ကြွချီတော်မူ တရားတော် ၂၁-၃-၂၀၀၈
၂။ မြတ်စွာဘုရား ရာဟုလာအား မိန့်ကြားသော သြ၀ါဒ တရားတော် ၁၆-၄-၂၀၀၈
၃။ သီလသိက္ခာ တရားတော် ၂၂+၂၃-၃-၂၀၀၈
၄။ သမာဓိသိက္ခာ တရားတော် ၃၁-၃-၂၀၀၈
၅။ ပညာသိက္ခာ တရားတော်(၁) ၁-၄-၂၀၀၈
၆။ ပညာသိက္ခာတရားတော် (၂) ၄-၄-၂၀၀၈
၇။ ဘ၀တန်ဘိုးတရားတော် ၁၁-၅-၂၀၀၈
၈။ ဥစ္စာလေးမျိုး တရားတော်နှင့် ကျောင်းအလှူ တရားတော် ၂-၅-၂၀၀၈
၉။ တပေါစမင်္ဂလာ တရားတော်
၁၀။ ချမ်းမြေ့ မေတ္တာပို့အဓိပ္ပါယ် တရားတော် ၄-၈-၁၉၉၉
၁။ အချိန်ရွေးမနေနှင့် တရားတော်
၂။ သုံးပါးသာသနာ သုံးပါး သိက္ခာ တရားတော်
၃။ သမာဓိသုံးမျိုး တရားတော် ၁-၂-၂၀၀၇
၄။ သြ၀ါဒ ပါတိမောက် တရားတော် ၃၀-၈-၂၀၀၈
၅။ ဆွမ်းအကျိုးငါးပါး တရားတော်
၆။ မောင်ရဲကျော်သူ၏ မွေးနေ့အလှူ တရားတော်
၇။ ၀ါဆိုသင်္ကန်းအလှူ တရားတော်(၁) ၃၀-၇-၁၉၈၉
၈။ ၀ါဆိုသင်္ကန်းအလှူ တရားတော်(၂) ၃၀-၇-၁၉၈၉
၉။ ကိလေသာ သုံးဖြာ သိက္ခာသုံးပါး တရားတော် (၁) ၁၇-၃-၁၉၉၄
၁၀။ ကိလေသာ သုံးဖြာ သိက္ခာသုံးပါး တရားတော် (၂) ၁၇-၃-၁၉၉၄
၁။ သမထ ကမ္မဋ္ဌာန်း နှင့် ၀ိပဿနာဘာဝနာ တရားတော် (၁) ၄-၁၁-၂၀၀၈
၂။ သမထ ကမ္မဋ္ဌာန်း နှင့် ၀ိပဿနာဘာဝနာ တရားတော် (၂) ၅-၁၁-၂၀၀၈
၃။ သမထ ကမ္မဋ္ဌာန်း နှင့် ၀ိပဿနာဘာဝနာ တရားတော် (၃) ၆-၁၁-၂၀၀၈
၄။ သမထ ကမ္မဋ္ဌာန်း နှင့် ၀ိပဿနာဘာဝနာ တရားတော် (၄) ၉-၁၁-၂၀၀၈
၅။ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးတရားနှင့် နတ်တို့ ပျော်ချိန်သုံးမျိုး တရားတော် ၂၀-၃-၂၀၀၈
၆။ ၁၃၆၉- ခုနှစ်မှ ၊ ၁၃၇၀- ပြည့်နှစ်သို့နှစ်သစ်မင်္ဂလာသ၀ဏ်လွှာ တရားတော် ၅-၄-၂၀၀၈
၇။ ကိုယ်ကျင့်တရား မည်သည့်အခါမျှ မချွတ်ယွင်းပါစေနှင့် တရားတော် ၇-၄-၂၀၀၈
၈။ သူတော်ကောင်းလက္ခဏာနှင့် သူယုတ်မာလက္ခဏာ တရားတော် ၂၈-၉-၂၀၀၈
၉။ မုချ ပြုလုပ်ရမည့် ကောင်းမှုကုသိုလ်အကျယ်ဆယ်မျိုး တရားတော် ၂၉-၁၀-၂၀၀၈
၁၀။ သာသနာ့ရဲဘော် တရားတော် ၈-၄-၁၉၉၈
၁။ သလ္လသုတ်ဒေသနာ (ဆူး) တရားတော် (၁) ၁၃-၄-၁၉၉၃
၂။ သလ္လသုတ်ဒေသနာ (ဆူး) တရားတော် (၂) ၁၄-၄-၁၉၉၃
၃။ သလ္လသုတ်ဒေသနာ (ဆူး) တရားတော် (၃) ၁၅-၄-၁၉၉၃
၄။ သလ္လသုတ်ဒေသနာ (ဆူး) တရားတော် (၄)
၅။ သလ္လသုတ်ဒေသနာ (ဆူး) တရားတော် (၅)
၆။ သလ္လသုတ်ဒေသနာ (ဆူး) တရားတော် (၆)
၁။ စိတ်တရားတော် (၁)
၂။ စိတ်တရားတော် (၂)
၃။ စိတ်တရားတော် (၃)
၄။ စိတ်တရားတော် (၄)
၅။ စိတ်တရားတော် (၅)
၆။ စိတ်တရားတော် (၆)
၇။ စိတ်တရားတော် (၇)
၈။ စိတ်တရားတော် (၈)
၉။ စိတ်တရားတော် (၉)
၁၀။ စိတ်တရားတော် (၁၀)
<a title="To download to your hard disc, please right click and choose "save target as"." href="http://dhammadownload.c
ReadMoe “Chan Myay Sayadaw”
Labels: Movie, Webpage, တရားတော်များ
Free Domain and Free Host ရနိုင်တဲ့ နေရာလေးပါ .. စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး
အဆင်မပြေလို့ အသေးစိတ် သိချင်ရင်တော့ မောင်ကျော်စွာငြိမ်း ဆိုဒ်မှာ
ReadMoe “Free Domain & Host”
Posted by Kaung Khant at 24.2.100comments Links to this post
ညီနေမင်း ရဲ့ ဆိုဒ်က ရတာပါ။။
Posted: 15 Feb 2010 11:15 PM PST
Badongo.com 1 GB 12 GB/day limit on free 'member' accounts. Inactive files deleted after 90 days.
megarotic.com 500 MB Inactive files deleted after 21 days - use the 'video' feature to view submissions.
SimpleUpload 300 MB Supportsa"FreeFolders" option for storage.
ReadMoe “Hosting Web”
Posted by Kaung Khant at 21.2.100comments Links to this post